Mitambatra LXDE sy Razor-Qt | Avy amin'ny Linux
Mitambatra i LXDE sy i Razor-Qt
Izy ireo dia Rohy | | fampiharana
Segondra vitsy lasa izay tamin'ny alàlan'ny Twitter (miresaka momba ny fotoana nanombohako ilay drafitra) no henoko ny vaovao momba ireo tetikasa ireo LXDE y Razor-Qt hiaraka amin'ny hery a tetikasa tokana.
nanomboka nitantana ny fanakambanana taorian'ny fanambarana ny LXDE handefasana ilay tetikasa Qt, satria na dia hamoaka kinova vaovao (0.6.0) Razor-Qt tsy ho ela aza dia nihena ny fampandrosoana.
Ny drafitra dia ny hanangonana ny tsara indrindra amin'ny tetikasa sy seranan-tsambo tsirairay, na manoratra avy hatrany am-boalohany, izay rehetra ampiasainao GTK, ankoatry ny fanatsarana ny tetikasa arak'izay azo atao mba hahafahany miasa amin'ny solosaina maro dia maro, ny fanahin'ireo tetik'asa roa ireo ary manolotra tontolo iainana izay manome traikefa lehibe, ankoatry ny famporisihana izay rehetra liana hiasa amin'ny fampandrosoana satria tsy ho zavatra tsotra izany ary handany fotoana.
Ny marina dia faly aho amin'ity vaovao ity, satria tiako ny tetikasa roa (fantatrao fa tiako ny tontolo maivana, ary raha ny marina dia mampiasa LXDE aho), ary mieritreritra aho fa hisy tontolo lehibe hivoaka, afaka manaloka lanja mavesatra (ary tsy nilaza tsara kokoa hoe 😉)
Amin'ny fomba andao anao pikantsary an'ny LXDE-Qt nataoko andro vitsy lasa izay:
loharanom-baovao: Ny mason'ilay replika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mitambatra i LXDE sy i Razor-Qt
olona zohy dia hoy izy:
Izaho manokana RazorQT dia tetikasa tiako, saingy na dia tsara toy inona aza dia hitako fa miadana be ny fivoarany miorina amin'ny tetikasa hafa. Raha izaho manokana dia heveriko fa tokony hamindra ny hareza misy azy ireo mankany QT5 izy ireo, ary avy eo hamita ny LXDEixarlo. Azo antoka fa ity dingana ity dia mety hanampy be indrindra eo amin'ny fandrosoana amin'ny ho avy….
Valiny ho an'ny olona lava-bato
Vaovao tsara inona. Tiako be ihany koa ny solosaim-birao maivana ary mampiasa Lubuntu amin'ny milina aho. Manantena aho fa hahita zavatra misy "endrika" tsy ho ela
Mihaino ireo repo LXDE-Qt aho (satria eo no hampakarina ny zava-drehetra) ka raha vao manomboka mahita zavatra vaovao azo zahana farafaharatsiny aho dia manangona sy manamarina, ary raha ilaina dia mitaterà, omeo ny hevitro sns.
Niezaka nanangona azy aho. Afaka nanangona libfm sy pcmanfm-qt tsara fotsiny aho, saingy ny lxpanel-qt sy ny lximage-qt dia tsy azo natao.
Mahafinaritra ity vaovao ity. Ny tetikasa hafa manana tanjona mitovy amin'izany dia tokony homarihina. Amin'ireo vaovao tiako indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy.
«Ny tetikasa hafa manana tanjona mitovy amin'izany dia tokony ho marihina» Manaiky tanteraka 😀
vaovao tsara, definimnt ny tsara indrindra amin'ny volana, indrisy fa ny ubuntu sy ny mir dia tsy mandeha amin'ny làlana mitovy
Eny, ny marina dia eny, samy midera ary milaza fa hanohana an'i Wayland aho ary omen'izy ireo ny vodilanitra
ireo tompon'andraikitra amin'ny lubuntu dia efa nilaza fa tsy handeha hijery. hitohy amin'ny xorg, avelao ny mir ho safidy
Toa amiko ny tenin'i tannhausser dia namintina azy rehetra:
"Heveriko fa vaovao tsara ity, famantarana fa ny vondron'orinasa rindrambaiko maimaimpoana, mihoatra ny sombin-javatra izay iampangana antsika araka ny fomban-drazana, dia afaka mivondrona hamoaka ireo tetikasa izay tena manandanja"
Ny pikantsary dia toa windows misy sary marobe eo amin'ny birao hahaha (sangisangy fotsiny, aza tezitra aho)
Mikasika ny vaovao dia novakiako fa ny fiovana dia noho ny tsy fivoaran'ny gtk2 intsony ary ny safidy dia gtk3 (fanjifana bebe kokoa) na qt. Na izany na tsy izany, faly aho nandre ny vaovao, ka ho haingana kokoa ny fanovana.
Eny, izay ihany, na mandeha amin'ny GTK3 izy ireo na mankany amin'ny Qt4 satria mbola hanana fanohanana ireto farany raha mbola tsy hanana izany intsony ny GTK2.
Amin'ity taha ity dia mila mianatra manao interface amin'ny Qt ambanin'ny Python aho
Raha ny marina, ny Gtk3 sy Qt4 / Qt5 dia mampitombo ny fanjifana. Ny zava-mitranga dia satria handeha any amin'ny tranomboky vaovao izy ireo, dia aleony Qt satria mora kokoa ny mivoatra aminy.
Ho ahy dia mangataka loharanom-pahalalana bebe kokoa noho ny angatahin'i GTK4 ny QT3, saingy mora kokoa ny mandrindra sy mamerina mampiasa kaody ao amin'ny QT, izany no antony nisafidianan'izy ireo ny QT hanao ny fampandrosoana.
Tsara kokoa hatrany ny manambatra, antenaiko fa ny valiny farany amin'ity fanakambanana ity dia handresy lahatra ahy hivadika ho Qt (toa tsara kokoa ny zava-drehetra ao Qt)
Vaovao tsara. Mampihena kely ny fizarazarana ary mandrindra ny ezaka amin'ny lafiny iray. Ity herinandro ity dia efa nandalo tamin'ny Andao hampiasa linux sy avy amin'ny linux.
Vaovao tsara azo antoka 😀
Hitako ity vaovao ity ary heveriko fa izay mampiasa an'io 99 isan-jato io dia mampiasa varavarankely ary ilay iray hafa dia mizara roa amin'ny distro linux 1000 izay misy fa ny lozisialy linux tsy mahomby dia miaina ny fananana sfw
Oh ireto troll mankaleo ireto!
Mamalia ny hafa
Eny, noho ny rindrambaiko manana sy ny milina fampielezan-kevitra ananany dia manana atidoha toa anao betsaka izahay. Azontsika atao koa ny mahatsapa fa ambony izy ireo.
Miasa ho anao ve ny rindrambaiko manana? Faly be aho, na dia tsy dia be loatra ho ahy aza, rindrambaiko maimaimpoana miasa bebe kokoa ho ahy
Eny, isaky ny miditra sy mampiasa Facebook, Google na Wikipedia ianao dia misaora rindrambaiko maimaim-poana satria miasa amin'ny Linux ny mpizara rehetra amin'ireny tranonkala ireny. TROLL !! 😀
sexiest dia hoy izy:
Eny, izay naloanao ho an'ny güindous dia azonao ampidirina amina kilasy fanoratana izay ilainao tokoa, Adrián. XD
Valiny amin'ny massexy
Toa maivana ny zava-drehetra.
Amin'ny maha OT kely ahy dia toa ho an'ny Linux 3.11 sy ny kinova MESA vaovao dia misy tsy ampoizina mahafinaritra ho antsika izay mampiasa nouveau sy radeon, miaraka amin'i Gallium3D, azo antoka fa hankasitraka izany ireo mpilalaontsika anatiny 😀
Tonga koa directx zanatany
Direct3D 9, 10/11 dia nateraka efa ela, ary fanatsarana ny mpamily nouveau sy radeon DRM, ary koa ny fanohanana ny fanafainganana ny fitaovana VP2 / h264, fanatsarana tena mahafinaritra 😀
Ny vaovao momba ny directx an'ny teratany dia hatramin'ny 2010, saingy toa mbola tsy nampiharina tamin'ny mpamily mesa izany, mandra-pahatongan'io dia nipoitra indray ny tetikasa
Ny fivoarana dia fanandramana amin'izao fotoana izao, azo ampiasaina ihany io raha ny disto anao no manangona ireo endri-javatra ireo, na maka ny loharano ianao ary manangona azy irery. Tao amin'ny Arch dia nanana fotoana nosedraina aho, ary tena niasa tamin'ny lalao toa ny Starcraft II sy Diablo 3, nihatsara be ny fampisehoana tamin'ny alàlan'ny divay.
Elijah174 dia hoy izy:
Ity dia ho fampifangaroana lehibe, toa handao ny KDE aho hahaha ...
Valiny ho an'i Eli174
Toa vaovao tsara amiko izany, tena tsara ho an'ireo tetikasa roa ireo izay miaraka.
Akory ny hatsaran'ny XFCE sy ny E17 nanao toy izany.
Toa tsara amiko satria ny LXDE sy ny Razor dia nampientanentana ahy tamin'izany fotoana izany, saingy efa nijanona tsy nihetsika izy ireo ary mandroso fotsiny amin'ny fandresena, mba hahitana raha tena mandroso tokoa ve izy ireo
Manandrana ny Sparky Linux (fitsapana an'i Debian) fotsiny aho amin'ny Razor QT ary tena tiako ilay izy. LXDE koa toa tsara amiko. Antenaina fa ny fitambarana dia hamoaka ny tsara indrindra amin'ny fandraisana andraikitra roa tonta.
Eny, ny tena marina dia tena tsara fa ny tetikasa mifandraika dia manambatra hery. Inona no ohatra tsara kokoa noho ny From Linux and Let's Use Linux ..
Manantena aho fa hahita fandrosoana ary hiezaka hiara-miasa amin'ny zavatra iray.
Toy izany koa no lazaiko. Ny valiny azo rehefa atambatra ny ezaka dia mahatalanjona.
Ny fanapahan-kevitra hanambatra ireo tetikasa roa dia tena tsara, satria Razor-QT dia afaka manampy amin'ny fifanarahana QT sy LXDE, miaraka amin'ny fahombiazan'ny tontolon'ny birao.
Oh, raha ny fanazavana, ny lohahevitra LXDE anananao dia tsara. Mampatsiahy ahy ny XFCE izany.
Tokony hitranga amin'ny tetik'asa marobe izany. Mitambatra ho iray.
Miandry izay hivoahan'ny lafaoro ...
Haharitra hafiriana ny fiomanana? May ny tanako hanaporofoana izany.
Tiako ny jazz dia hoy izy:
Tiako ny LXDE, ampiasaiko amin'ny Fedora.
Andininy iray amin'ny lahatsoratra: ao amin'ny fehintsoratra voalohany tsy hita famaky: «efa simba» (endrika endrin'ny mpanampy manana)
Mamaly an'i Ilikejazz
Tsy jereko izany.
Misaotra tamin'ny fampitandremana
Manantena fotsiny aho fa tsy hitovy amin'ny kde izany, fantatro fa maro ny tia ny kde, saingy tsy dia tiako loatra izany ary antenaiko fa tsy hitovy na tsy hitovy ny toetrany,
Saingy tena aleoko ny lxde amin'ny gtk3 mihoatra ny zava-drehetra satria ny ankamaroan'ny rindranasa dia vita amin'ny gtk ary ireo an'ny kde na qt dia misaraka, na dia hitako foana aza fa ny gtk dia tsy mifanaraka 100% amin'ny qt sy ny mifamadika amin'izany.
Fantatro sahady fa ny fampiharana gtk dia miasa amin'ny fampiharana kde sy qt amin'ny gnome, saingy mila ampifanarahana foana izy ireo ary tsy dia tsara tarehy foana izy ireo, tadidiko fa tsy ela akory rehefa nanandrana kde aho ary nametraka fampiharana 1 gtk, dia nety nefa toa nampiasa ilay lohahevitra mahazatra aho Windows, manantena aho fa ny lxde dia hitovy amin'ny mahazatra ihany, ny hany zavatra tiako hovaina dia ny lohahevitra tsy misy fotony, satria ny fisehoan'ny gtk2 dia mahatsiravina ary antenaiko fa rehefa alefa ny lxde-qt dia hanana endrika tsara kokoa, toy ny Misafotofoto amin'ny faharatsiana ny olona amin'ny fahombiazana, tsy milaza aho fa manana mangarahara na manjelanjelatra na inona na inona trinkets, fa amin'ny ankapobeny ny zavatra fanjifana ambany dia ratsy tarehy ary tsy azoko hoe maninona no tokony ho toy izany raha toa ka mety manana endrika mendrika miaraka aminy. Ireo izay namorona ny lohahevitra tsy misy fangarony ary tsy hampiakatra ny fanjifana loharanom-pahalalana fotsiny mba hahatonga azy io ho mendrika, tsara izany ary tsy hitondra izany amin'ny fomba tsy izy raha nilaza zavatra tsy tian'ny olona aho dia raiso mihoatra ny zavatra rehetra araka ny hevitro manokana satria izay no lazaiko ato amin'ity hevitra ity
Ny Paradigma vaovao: ny mpamaky no mpanonta, maimaim-poana ny atiny
ny lalao maty an-tongotra